🥇 ▷ Waa maxay codka xakamaynta iyo sida loogu isticmaalo Mac-kaaga? ✅
Waa maxay codka xakamaynta iyo sida loogu isticmaalo Mac-kaaga?
Oktoobar 7, 2019. Apple waxay soo saartay macOS Catalina muddo dheer la sugayey, oo ah nooca lix iyo tobnaad ee ugu weyn nidaamka ay ku shaqeyso, iyo kan ku guuleysta MacOS Mojave. Haddii sidaas loogu cusboonaysiiyo macOS Catalina, Waxaa laga yaabaa inaad isku dayday howlo cusub oo nolosha beddelaya, siiso raaxo iyo xoogaa xiiso leh.
Waxaa ka mid ah barnaamijka xakamaynta codka ee loogu talagalay dadka raba inay xukumaan Mac halkii ay isticmaali lahaayeen keyboard-ka ama jiirka.
Haddii taasi taasi tahay xaaladaada, ama haddii aad si fudud u rabto hab cusub oo aad ku isticmaasho Mac adiga oo aan ku qorin nambarkaaga kumbuyuutarka ama aad adeegsaneyso jiirkaaga, akhriso si aad u ogaato waxa xakamaynta Caymiska ay tahay iyo waxa aad ku samayn karto.
Waa maxay codka xakameynta Mac?
Xakameynta codka waa howl MacOS Catalina oo kuu ogolaaneysa inaad xakameyso kumbuyuutarkaaga Mac adiga oo adeegsanaya amarrada cod ee fudud ee ay fulisay tikniyoolajiyadda codka lagu aqoonsado.
Shaqadan, waxaad ku siin kartaa amarro Mac aadna ku qori kartaa qoraalka dukumiintiyada iyo emaylka. Tan waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka aan rabin in ay isticmaalaan jiirka caadiga ah ama furayaasha furaha oo ay wali ku shaqeeyaan kombiyuutaradooda ‘Mac’.
Uma baahnid waqti aad ku furatid oo xir xirna codsi amase amarro cod ah ku soo saarto codkaaga. Waad u adeegsan kartaa Siri si aad u maamusho qaar ka mid ah shaqooyinka aasaasiga ah ee barnaamijkaaga Mac, sida hagaajinta mugga iyo badalida heerka iftiinka, laakiin iyadoo la adeegsanayo xakameynta codka, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn Siri howlaha noocaas ah.
Xakameynta codka ayaa adeegsanaya habeynta aaladda iyo mashiinka aqoonsiga hadalka ee loo adeegsado Siri si uu u bixiyo khibrad aad u wanaagsan Catalina.
Adeegsiga kelmadaha iyo amarrada codka ayaa sidoo kale bixiya dabacsanaan badan waxayna la jaan qaadi kartaa noocyadii hore iyo kan hadda jira ee macOS.
Sida loo bilaabo oo loo isticmaalo xakameynta codka ee Mac-gaaga
Haddii aad u isticmaasho nooca ugu dambeeya ee ‘MacOS Catalina’ ee ku yaal Mac-kaaga, u isticmaal hagahan tilmaan-siinta ah si aad u xakameyso adigoo adeegsanaya codkaaga.
Tallaabada 1: Ku dadaal xakameynta Codka adigoo gujinaya menu> Nidaamka> Xulashooyinka oo dooro Helitaan.
Tallaabada 2: Xarka dhinaceeda, dhagsii Xakameynta Codka.
Tallaabo 3: Guji Ku dhaqdhaqaaq xakameynta codka. Haddii tani ay tahay markii kuugu horreysay, waxaad heli doontaa soo dejiso hal khariidad Apple Iyadoo faylka lagu xushay luqaddaada. Mar haddii la hawlgeliyo, makarafoon sabayn ah ayaa ka soo muuqan doona shaashadaada iyagoo matalaya codbaahiyaha laga soo xushay xulashooyinka Xakameynta Codka.
Waad ka horjoogsan kartaa Xakameynta Codka inuu dhageysto adigoo gujinaya Joojinta ama adoo dhahaya “Jooji”. Tani waxay joojineysaa adeegga oo, markii aad diyaar u tahay inaad mar labaad isticmaasho, dhagsii ama dhaho “Toos.”
Ogeysiis: Marka codka xakameyntu shaqeynayo, ma arki doontid xulashooyinka ereyada kelmadaha furaha ah.
Sida loo isticmaalo xakameynta codka ee Mac-gaaga
Waad u adeegsankartaa Xakameynta Codka dhamaan codsiyadaada Mac, ooy kujiraan macaamiisha emaylka, qaabeynta qoraalka qoraalka, araajida farriinta iyo inbadan.
Waxaad guji kartaa menu> Nidaamka Xulashada> Helitaanka> Xakameynta Codka oo guji “Amarada” si aad naftaada ugu barato amarada aad isticmaali karto. Ama dhaho “Tus amar” oo eeg liiska amarada aad heli karto.
Liiska amarada waxaa lagu saleeyay macnaha guud, sidaa daraadeed waxaa laga yaabaa inaadan ka helin waxoogaa kala duwanaansho liiskaan ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad ku noqon kartaa doorbidyada codka xakameynta oo aad doorataa Play Sound markii amarka la aqoonsado si aad u ogaato haddii Voice Control uu dhageysto waxa aad ku leedahay amar ahaan.
Intaa waxaa sii dheer, waad raadin kartaa ama dhexgalin kartaa amarrada asalka ah, ama si fudud u abuuri kartaa mid adiga kuu gaar ah. Si tan loo sameeyo, dhagsii + qeybta hoose ee bidix ee shaashadda si aad u sameyso amarro gaar ah.
Noocyada amarrada aad u isticmaali karto xakameynta codka ee Mac-gaaga
Amarada Duulista Aasaasiga ah
Xakameynta codka ayaa kuu oggolaaneysa inaad dhex gasho isku darka magacyada dalabyo badan, kontoroolo ama sumadaha iyo walxaha kale ee shaashadda oo lagu garto amarada qaarkood. Tusaale ahaan, waxaad dhihi kartaa “bog furan” ka dibna “Guji” Dukumiinti Cusub “haddii aad rabto inaad furato dukumiinti cusub. Si loo badbaadiyo, dhaho amarka “Dukumiinti Badbaadi” oo wax walbana adiga ayey kuu samayn doonaan.
Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa codkaaga si aad u dhaqaajiso habka mugdiga ah, dib u bilawso qalabkaaga Mac ama aad ku bilowdo farriin cusub gudaha Mail oo aad wax ka qabato.
Kaantaroolka Codka ayaa u aqoonsanaya qaybo ka mid ah shaashaddaada Mac inuu yahay mid la badali karo, sida sanaadiiqda jeegaanta, menus iyo badhamada. Adigoo adeegsanaayo tirada isugeynta ah, waxaad si dhaqso leh ula falgali kartaa qeybahaan. Si aad uxiriso tiro dulsaar ah, dheh “Tus nambar” oo dheh lambarka si aad u gujiso.
Taasi waa hab fudud oo lagula macaamilo boggaga websaydhka iyo baraha kale ee adag. Tusaale ahaan, biraawsar bog, waxaad ku dhihi kartaa “Raadinta Waxbarshada” oo aad adeegsan kartaa tiro dul-saar ah si aad u xusho natiijooyinka adoo dhahaya “Tus lambarrada. Guji 1.”
Haddii aad ubaahantahay inaad kala soocdo sheyada leh magacyo isku mid ah, Codka xakamaynta wuxuu sii wadi doonaa inuu muujiyo tirooyinka kujira menu.
Tani waa muuqaal kale oo aad u adeegsan karto inaad la macaamilto qaybo ka mid ah shaashadda ‘Mac’ oo aan laheyn kontorool ama in codka Koontaroolka uusan u aqoonsaneynin wax la riixi karo. Si aad u adeegsato, dheh “Tus grid” si aad u aragto grid lambarka leh oo aad u sii wado hagaajinta xulashadaada adoo sheegaya lambarka aad rabto.
Si aad u qarisid nambarka koodhka, si fudud u dhaho “Qari nambarka” ama “Qari mugga” si aad u qarsatid lambarada iyo grid-ada.
Hawsha ku jirta Maareynta Codka waxay u beddeleysa ereyada lagu hadlay qoraal ahaan si aad u geli karto farriimaha dukumiintiyo, emayl ama qoraallo qoraal oo aad si joogto ah ugu sheegi karto. Waxa kale oo aad cayimi kartaa calaamadaha xarfaha, emojis, astaamaha iyo xulashada, qaab, dhaqaajinta iyo tirtirka qoraalka adoo adeegsanaya amarrada.
Fahamka astaamaha macnaha guud, xakameynta codka wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u gudubto inta u dhaxaysa amarrada iyo kelmadaha dhib la’aan. Tusaale ahaan, waxaad ku tilmaami kartaa oo aad ku diri kartaa farriimaha Codsiga adigoo odhanaya wax sida “imminka ayaan imid.” Guji dir “
Ogeysiis: Maareynta codka ayaa waliba kuu ogolaaneysa inaad sameyso ereyadaada Si loogu isticmaalo ereybixin.
La hadal Mac-kaaga
Waxaan rajeyneynaa inaad hadda ogtahay waxa xakameynta codku tahay iyo sida loo adeegsado muuqaalkan weyn si aad ugu raaxeysato khibrad ficil oo xiiso leh oo ku saabsan Mac-kaaga. Isku day qaar ka mid ah amarrada oo arag sida ay u fududahay in wax la sameeyo iyada oo aan la isticmaalin aaladda soo gelinta dhaqameed.
Xiga: Ma ka daashay inaad ku soo laabato koontada ugu weyn ee Netflix kaliya si aad u hesho cinwaan ay ku ciyaarto? Hadda waxaad u adeegsan kartaa Kaaliyaha Google inaad ka cayaarto waxa ku jira astaantaada Netflix. Baro sida qaybta dambe.